Obodo | RayHaber | raillynews
HomeỤzọ Awara AwaraỤgbọ okporo ígwè TireMetrobus
Ozi BRT, ihe ọghọm nke BRT, maapụ BRT, ụzọ BRT, nkwalite BRT na ụgbọ elu dị ugbu a
IETT ga-aga n'ihu na-ebugharị ndị njem n'oge ezumike ahụ. N’ụbọchị oriri a ga-etinye n’oge ọ bụla, a ga-ebugharị ndị njem n’ahịrị bọs dịka usoro Satọdee dị na Satọde na n’ụbọchị ndị ọzọ dịka usoro Satọdee si dị. Maka ụlọ ọgwụ [More ...]
Ritbọchị Pụrụ Iche na Ọgbọ Ọhaneze Echi!
N'ime oke ọgụ nke coronavirus, a na-ewere usoro iji gbochie akụkụ ụfọdụ ruo echi. A na-eche echiche ntụrụndụ nke mbụ na nke a na njem ọha na eze. N’ihi na mgbochi niile dị n’ịgbọ njem ọha na-aga n’ihu na Mọnde, Mee 11. [More ...]
IETT njem ga-emejuputa na ngwụcha izu na Istanbul
A ga-etinye oge ịghachị na Satọdee na Sọnde (9 - 10 Mee). A na-eme atụmatụ ịhazi ụgbọ elu 495 ma ọ bụ puku mmadụ asatọ, narị isii na iri isii na isii. [More ...]
Ndị njem IETT ga-aga n'ihu ngagharị
Dabere na mkpebi ewepụtara n’agha agha megide coronavirus, a ga-etinye iwu igbochi na Fraịde, Satọdee na Sọnde. IETT atụmatụ njem maka ndị ọrụ ahụike, ndị nche na ndị ọrụ ndị ọzọ ga-aga ọrụ [More ...]
Metrobus, Metro na Steamboats ga-arụ ọrụ ụbọchị anọ na Istanbul
IMM weere ihe ndị metụtara njem ọhaneze na oge ị ga-eji mejuputa ya na Istanbul na Eprel 23-24-25-26. Ruo ụbọchị 4, bọs, ụzọ ụgbọ oloko na mmiri ga-abụ maka ndị ọrụ ahụike na ndị ọrụ mmanye. flights, [More ...]
İBB Nọnyere ndị Istanbul na mpaghara ọ bụla na Oge Mbupu
N'ime ogo nke coronavirus, IMM nọ n'ọhịa n'oge oge elekere 18, nke etinyere iji kpuchie Eprel 19 na 48. IMM ji puku mmadụ iri na asaa jee ozi. İBB 17 puku [More ...]
IETT Kahraman nọ n’akụkụ ahụike Ahụike ..! 4.767 Ndị njem gaa ụlọ ọgwụ
IETT kpọtụụrụ ụlọ ọgwụ niile nke ọha na nke onwe na Istanbul iji hụ na ndị ọrụ ahụike nwere ike iru ebe ọrụ ha, ma kenye ụgbọala maka ụlọ ọgwụ ọ bụla. Inwe ọrụ n’oge oge ọmụmụ [More ...]
Ọ bụ ezie na oge ị ga-aga na ọnọdụ ruo n'oge oke ntiwapụ nje Corona n'obodo 30 mepere emepe na Zonguldak, Habertürk bịanyere aka na nkwupụta ọgba aghara. Dabere na akụkọ banyere Onedio; “Iji tụọ nkwụpụta njem na Istanbul [More ...]
Oge ole nke Transportgbọ njem Ọgwụ Izu na Istanbul ..? Ndi Metrobus, Bus, Marmaray, Ferry na Metro Work?
N'ime awa ole ka a ga-ebugharị njem ọha na eze n'etiti 18-19 Eprel, mgbe enyere iwu ịlọta na Istanbul? A gwara Munlọ Ọrụ Obodo Obodo Istanbul banyere obodo ukwu na bọs. Ọtụtụ n’ime Istanbul [More ...]
Directorate IETT, nke ya na ndị isi obodo Metropolitan nke Istanbul, mere ụfọdụ nhazi maka oge a ga-amalite, bụ nke a ga-eme n’April 18, Satọdee - Eprel 19, Sọnde niile gbasara usoro nje corona. IETT; ututu [More ...]
Nkwupụta gbasara Ihe mberede Metrobus Site na IETT
IETT kwuru na ihe mberede ahụ dị na Avcılar, ebe metrobus abụọ dakwasịrị, bụ otu n'ime ndị ọkwọ ụgbọ ala na-agafe. Na nkwupụta nke IETT kwuru; “Na 16.55 na mgbede, na-abịa site n'akụkụ dị n'etiti IMM Social Facilities na ọdụ ụgbọ Metrobus na Küçükçekmece [More ...]
Abụọ na-agbakọ metrobus kwusara isi na Avcılar. N'ihi ihe ọghọm ahụ, ọrụ metrobus kwụsịrị n'akụkụ abụọ. E zigara ndị uwe ojii na ndị otu ahụ ebe ahụ. Nkwupụta Radyo Pazarlama dere na akaụntụ Twitter, “100 İBB [More ...]
Ohere Istanbulbulkart maka ndị ọrụ ahụike
IMM emeela njem njem ọha na ebe a na-adọba ụgbọala ISPARK na ndị ọrụ ahụike na-akwụghị ụgwọ na-akwụghị ụgwọ nye ndị ọrụ ahụike na-enye ọrụ dị mkpa n'ọgụ megide coronavirus na Machị 19. Ndị ọrụ na-enweghị njirimara ụlọ ọrụ, dị ka ndị na-ere ọgwụ, nwere ike irite uru na ngwa a ugbu a. [More ...]
İBB kwụghachiri ndị ọrụ akwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ nke puku dọla 70 dollar na ụgwọ 3
Onye isi ala İBB Ekrem İmamoğlu nyere ndụmọdụ ka ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ IETT bụ ndị rụzigharị akụkụ ihe ruru puku dọla 70 mebiri emebi, nke bụ usoro ha chọtara. Igwe ọkụ eletriki Mustafa Kabaoğlu, onye ọrụ ụgbọ ala [More ...]
Gọọmentị nke Istanbul na-ewere Usoro Ọhụụ iji Chebe Ọnọdụ Ndị Na-elekọta Ọha na Publicgbọ njem Ọha
Governorship nke Istanbul kwupụtara usoro na mkpebi gbasara nchedo nke anya na ndị na-elekọta mmadụ na ụgbọ njem ọha, na-arụ ọrụ site na 13: 2020 na Mọnde, 05.00 Eprel XNUMX. Nkwupụta nke gọọmentị nke Istanbul kwuru: [More ...]
N'ime oge a na-alọta, nke ga-etinye n'ọrụ ruo awa 48, IETT ga-aga n'ihu ọrụ ụtụtụ na mgbede maka ndị bi na Istanbul ndị a gụpụrụ. Ezie na IETT na-eje ozi 445 ọbụna diluted, metrobuse na-ejekwa 10 [More ...]
Ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-arụ ọrụ na nchekwa nchekwa na Istanbul
Usoro ndị a na-emegide coronavirus amụbawo na njem njem ọha na Istanbul. IMM yiziri ndị ọkwọ ụgbọala na-eche nche nchebe megide ihe egwu nke nje. Ma ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ na ụmụ amaala ahụ nwere afọ ojuju na ngwa ahụ. Obodo Obodo Istanbul (IMM), obodo anyi na uwa [More ...]
Nnyocha Igwefoto Igwefoto bidoro na buslọ Ọrụ Metrobus
N'ime ogo nke coronavirus, IMM arụnyere igwefoto ọkụ na ọdụ ụgbọ mmiri, ebe ọnụ ọgụgụ ndị njem dị elu. A na-edugharị ndị njem ahụ ọkụ nwere nnukwu ụlọ ọrụ ahụike kacha nso. Obodo isi obodo Istanbul, nke emere maka coronavirus (Covid-19) [More ...]
Metrozọ Njikwa Ọhụụ na Nkwụsị Njikọ Ọhụụ na Isi Obodo
Metrozọ Njikọ Ọhụụ, Nkwụsị Mọdụl na Isi Obodo: can nwere ike ịhụ nkwụsị Metrobus niile na otu maapụ, nke bụ ọdụ ụgbọ ala kacha nso iji chọọ ebe ịchọrọ ịga na ebe ị ga-aga. [More ...]
Oge a na-ahazi Bus na Metrobus na Istanbul na-ahazi maka ọdịiche ọha na eze
Akụkọ ahụ mepụtara na IMI belata ọrụ njem njem ọha anaghị egosipụta eziokwu. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ ndị njem ji pasent 90 belata, ọnụ ọgụgụ ndị njem ji naanị pasent 20 belata. Ọrụ bọs na metrobus na Istanbul n'ime usoro coronavirus [More ...]
N'ịgbaso mkpa mkpuchi dị na mpaghara ọha, IMM kesara otu narị puku masks na bọs, metrobus na ferres. Onye isi ala Imamoglu kwuru, "Biko, ka anyị jiri nkpuchi mee ihe a." coronavirus [More ...]
N'ịgbaso mkpa mkpuchi dị na mpaghara ọha, IMM malitere ikesa 100 nkpuchi ebe mbụ na bọs, metro, metrobus na ferres, dịka Onye isi ala Ekrem İmamoğlu kọwara. Onye isi ala, Recep Tayyip Erdoğan, [More ...]
Chekwaa anya site na ọdụ ụgbọ ala na moto bus
IETT tinyekwara akwụkwọ mmado ọ na-akwado idobe ebe dị nchebe na Metrobus na bọs na mpaghara ndị echere na Metrobus na-akwụsị mgbe njem ọha. Covid - na - emetụta ụwa - nke a na - enweta megide ọrịa ọjọọ 19 [More ...]